Home CIYAARAHA CADAADADA EE EUROPEAN Ciyaartoyda Kubadda Cagta Jarmalka Bernd Leno Sheeko dhalasho sheeko dheeri ah Xogta loo yaqaan 'Biography'
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada dhameystiran ee kubadda cagta ee loo yaqaan 'Genius' kaas oo si fiican u yaqaan naaneyska "Dilka Ciqaabta". Dabeecadda Caruurnimadeena Bernd Leno iyo Xogta Aan Qaadista ah ee Dhegaha ah waxay kuu keeneysaa xisaab buuxa oo ah dhacdooyin la taaban karo laga bilaabo wakhtiga carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqaynta waxay ku lug leedahay noloshiisa hore, asalka qoyska, noloshii hore ee xirfadda, wadada caanaha, kor u qaadida sheekada caanka ah, xiriirka iyo nolosha qofka.
Haa, qof walba waa ogyahay inuu ka mid yahay goolhayayaasha ugu fiican adduunka. Si kastaba ha noqotee, dhowr ka mid ah waxay tixgelinayaan taariikhda Bernd Leno ee ah midka aad u xiiso badan. Hadda oo aan ado kale, aan bilaabi.
Bernd Leno Sheeko dhalasho sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka sawir-la'aanta - Taariikhda Hore iyo Qoyska
Bernd Leno wuxuu ku dhashay 4 March March 1992 waalidkiis; hooyadiis, Rosa Leno iyo aabihii, Viktor Leno Bietigheim-Bissingen, Jarmalka. Qoyska Bernd Leno waxay ka mid yihiin asal ahaan Jarmal-Ruushka oo u mahadceliyey aabihiis oo kala ah Jarmalka kala bar, badhka Ruushka.
Leno wuxuu ku koray walaalkiis magaalada Bietigheim-Bissingen ee koonfurta Jarmalka oo leh meel u dhow Stuttgart. Kuwa ogaa Leno sida cunuggu u arkeen wiil yar oo firfircoon. Noocyada noocan oo kale ah ayaa loo duubay ciyaaraha. Isagoo ka hadlayay isboortiska, xubin kasta oo qoyska Bernd Leno ah ayaa jecel kubadda cagta. Sida Leno mar hore u dhigo;
"Kubadda ayaa aad muhiim ugu ah qoyskeyga, walaalkaa iyo aniga ahaanteyda waa nolosheena. Waxaan mar walba dooneynaa inaan kubada cagta ciyaarno, si aan kubada u heysano. Kadibna, wax walba oo ciyaaro ah waa kubad. "
Markii hore fasaxyada, Leno wuxuu sii wadi lahaa inuu ciyaaro ciyaaraha maxaliga ah gaar ahaan "qaylo xumo" oo aan ku habooneyn isaga sababtoo ah wuxuu la jiray saaxiibo. Markii uu da'diisu ahayd 6, wuxuu go'aansaday inuu kubadda cagta u qaato si dhab ah isaga oo qaadaya xirfad.
Bernd Leno Sheeko dhalasho sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka sawir-la'aanta - Nolosha Mudnaanta Hore
Leno ayaa ku soo biiray liiska kooxdii uu dhalin yaraa SV Germania Bietigheim kaasoo siiyay marxaladdiisa inuu aasaaso xirfadiisa ciyaareed. Waxa uu bilaabay inuu riixo inuu yahay ciyaaryahan khadka dhexe ka ciyaara waqtigii uu ku biiray kooxda. Go'aanka Leno ee ah inuu noqodo xirfadle ma ahan kaliya khibrad malahan. Go'aankan noocan oo kale ah wuxuu keenay isaga oo isku dayaya tijaabooyin akadeemiyada ka weyn.
Marka da'da 11, Leno ayaa codsatay inay ku biiraan kooxda dhalinyarada VfB Stuttgart waxaana loo doortay inay ka qayb galaan tijaabooyin. Waxa uu ku biiray ciyaartoyda da'yarta ah ee 200 kuwaasi oo ku jiray liiska loo soo xulay tartamada.
Nasiib wanaag, Leno wuxuu ka mid ahaa ciyaartoyda 6 ee ay doorteen VfB Stuttgart ka dib markii ay ku qanciyeen tababarayaasha. Leno weli wali waxa uu ku sii jirayaa qadka dhexe.
Bernd Leno Sheeko dhalasho sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka sawir-la'aanta - Waddada Weyn
Sidee ayuu u noqday goolhaye: Ciyaaryahankan khadka dhexe ee yar yar, Leno waxa uu sameeyay daafacyo badan si uu u ilaaliyo daafaca iyo xitaa goolhayaha inta badan. Tani waxa uu sameeyay illaa uu ahaa 10 sano jir ah ka hor inta uusan keenin inuu noqdo goolhaye. Wareysi lala yeelanayo Arsenal FC, Leno markii mar la hadlay. In uu erayadiisa;
"Maalin ka dib goolhayaha ka yimid naadiga aan ku dhashay ayaanan imaan hal kulan, sidaasi darteed tababaraha ayaa weydiiyay cida uu doonayo goolhayaha.
Waxaan ku idhi, 'Waxaan rabaa inaan isku dayo'. Waxaan isku dayay, qof walbana waxaan arkay inaan aad u wanaagsanaa. Kadibna waalidiintayda ayaa i soo iibsaday gacan gashiga qaarna marnaba ma dooneynin inaan ka tago booska goolka ka dib. "
Maxaad ka heshay Leno inuu ku riyaaqo ficilka goolhayaha uu ahaa sanamkiisa, qofna ma ahan goolhayihii hore ee Arsenal, Jens Lehmann.
Inkastoo uu yar yahay, Leno ayaa hogaanka u dhiibay Isbaanish iyo Real Madrid Iker Casillas. Waxay ku taal Stuttgart Leno marka hore la kulantay Jens Lehmann oo uu ka qaatay casharo badan oo goolal ah. Isagoo ka hadlaya arrintaasi, mar buu u sheegay Arsenal Press;
Waan daawaday isaga oo aad u badan oo tababarkiisa ah, xitaa waxa uu jiray tababaro isaga la ah markii aan joogay 16 ama 17 sano jir. Wuxuu ahaa mid xoogan, sidaas darteed xirfadle. Taasi waa maskaxda aad u baahan tahay sida goolhaye xirfad leh.
Goolhayihii hore ee Arsenal, Lehmann ayaa weli ku sugnaa VfB Stuttgart markii uu Leno ku soo biiray xirfadiisa ciyaareed ee kooxda. Leno waxa uu naftiisa u arkay inuu yahay ninka ku guuleystay Lehmann markii loo dallacsiiyay kooxdooda sare ee kooxda. Nasiib darro taageerayaasha, Leno ayaa go'aansaday in uu aqbalo daaqsinka dhirta ka dib labo sanno oo uu la joogay kooxda oo markii hore ka ciyaaray qeybta saddexaad ee Jarmalka. Ciyaartii Leno waxa ay heshay tigidh Bundesliga ah oo uu la qaaday Bayer Leverkusen.
Bernd Leno Sheeko dhalasho sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka sawir-la'aanta - Kusoo caan bax
Inaad ka guurto qaybta sadexaad ee Jarmalka oo dhan sida ugu horeysa ee qaybta koowaad waxay ahayd mid xiiso badan isla markaasna xiiso leh Bernd Leno oo ahaa 19 oo keliya. Waxa ay aheyd mid adag sababtoo ah xaqiiqda ah inuu sameeyay kulankiisii ​​ugu horeysay ee horyaalka ee Chelsea ka dib seddex isbuuc oo uu ku biiray kooxda. Intii lagu jiray ciyaarta, Leno wuxuu soo bandhigay qaab ciyaareed cajiib ah oo ka dhan ah weeraryahanka ugu fiican ee Chelsea, Didier Drogba.
Wareysiga, Leno markasta ayaa dib loo soo celiyay;
Ka dib ciyaarta, Petr ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay oo igu faraxday. Uma baahnin in la yiraahdo waxyaabahan, laakiin waan ku faraxsanahay. Taasi waxay aheyd toddobo sano ka hor, waxaana haatan ku suganahay Arsenal - waa waali!
Ka dib ciyaaraha Champions League, waxa ay u muuqatay inay Bayer Leverkusen heshay goolhaye cusub oo goolhaye ah. Ma ogeyd?… Kulanka Champions League wuxuu ku abaalmariyay Leno abaalmarinta Yurub markii ugu yaraa ee uu ku ciyaaro UEFA Champions League. Waxa uu ahaa sanadihii 19 oo kaliya iyo maalmaha 193.
Ka dib markii uu ka tagay Jens Lehmann, Leno wuxuu si joogta ah u noqday kooxda koowaad ka dib qaab ciyaareed cajiib ah. Waxa uu sii waday inuu sii joogo Bayer Leverkusen oo ka yimid 2011 ilaa 2018 isagoo u saftay 233. Waxyaaluhu way fiicnaadeen dhammaanba tan iyo sanadba MAALIN XUN!!
Cadaadiska La Isaga Tago: Qof kastaa wuu ogaa Leno inuu leeyahay dhiiro gelin weyn Lakiin qofna ma ogeyn waxa ku dhacay maalintii ugu xumeyd intii lagu jiray October 2015 markii uu sameeyay goolkii ugu xumaa ee Bundesliga ee xilli ciyaareedka. Kulanka Bundesliga ay la ciyaarayaan Augsburg, Leno waxa uu ka soo horjeeday in uu gooyo baqdin aan dib-u-fiirin lahayn Jonathan Tah gadaashiisa dhabarka. Daawo video hoosta;
Isagoo ka hadlayay ka dib markii uu weeraray ereyada taageerayaasha, Leno ayaa yiri;
"Sida Goolhaye, waxaad tahay a dagaalka lafta. Waxaad si gaar ah u tababaraneysaa, waxaad si diirran u diirimeysaa. Waxaad u dagaalameysaa hal boos oo markaa kadib haddii aad hal qalad weyn sameysid, waxaad si deg deg ah u socotaa. "
Waqtigaan, waxa ay aheyd maalintii ugu danbeysay ee Leno oo uu la joogo kooxda uu jecel yahay Jarmalka. Waxa uu sameeyay oo dhan wuxuu ahaa inuu sugo fursad uu ka baxo. Nasiib wanaag, 19th ee June, 2018, naadiga English Arsenal wuxuu helay adeegyadiisa. Tani waxay siisay Leno fursad uu kula kulmo saaxiibkiisii ​​hore Petr Cech.
Inkastoo ay qasab ku noqon laheyd, Leno ayaa noqday goolhayaha kaasoo badali lahaa goolhaye kale oo Arsenal ah. Inta kale, sida ay yiraahdaan, waa taariikh.
Bernd Leno Sheeko dhalasho sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka sawir-la'aanta - Nolosha Xiriirka
Bernd Leno wuxuu la socday Sophie Christin tan iyo August August 15 2015, taas oo dhacaysa taariikhda ay u dabaaldegaan sannad-guuradooda.
Sophie oo ka soo jeeda Jarmalka iyo Jarmalka wuxuu ku dhashay maalinta 17th ee February 1997 (5 Sanado ka yar da'da ninka) ee Dusseldorf, Jarmalka. Waxay tahay arday suuq geynaya oo sidoo kale wakhti yar ku bixiya qaabaynta. Labadaba jacaylka ayaa lagu arkay meelo badan oo qaali ah oo ku riyaaqa fasaxooda.
In kasta oo ay muddo dheer wada joogaan, labada jacaylku ma qorsheynin qorshe kasta oo arooska ah. Si kastaba ha ahaatee, waa arrin kaliya waqti ka hor arooska aroosyada labadaba.
Bernd Leno Sheeko dhalasho sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka sawir-la'aanta - Naftaada Shaqsiga
Helitaanka in aad ogaato noloshiisa gaarka ah ee Bernd Leno ayaa kaa caawineysa inaad hesho sawir buuxa oo ku saabsan isaga.
Bilaabidda, isagu waa kaniisad Roomaan ah oo rumaysad leh. Leno ayaa mar uu dadaal u sameeyay inuu booqdo St. Basilica Basilica, Vatican ee magaalada Rome si uu u yeesho waxa uu ku magacaabo "waqti gaar ah" oo leh Pope Francis.
Ciyaaryahan Real Madrid ah: Inkastoo saaxiibadiisa Arsenal Hector Bellerin iyo Rob Holding ciyaari lahaa cayaaraha; Wac of Duty, Bernd Leno sida Juan Foyth wuxuu jeclaan lahaa inuu la sii joogo FIFA.
Ixtiraamka Leno ee Casillas ayaa ka soo muuqday xulkiisa xulkiisa xulkiisa ciyaaraha adduunka ee FIFA. Isagoo ka hadlayeyna, wuxuu mar yiri ...
"Waxaan mar walba u isticmaali jiray inaan u ciyaaro Real Madrid ciyaaraha PlayStation" ayuu yiri. "Casillas wuxuu ahaa sabab weyn"
Bernd Leno Sheeko dhalasho sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka sawir-la'aanta - Xaqiiqooyinka Xirfadaha Joogtada ah
Sidee ayuu u helayaa Nickname- "Ciqaabta Ciqaabta ": Inkastoo Leno wax badan ayuu bartay Jens Lehmann iyo Iker Casillas, laakiin waxa uu dhab ahaantii barin karaa labo goolhaye. Taasi waa ficilka "rigoorada badbaadinta" kaas oo siin jiray naanayste la jecel yahay.
Ma ogeyd?… Taagii horeLeverkusen gacmo furan ayaa mar hor istaagay inuu rigoore ka dhigo shan rigoore oo uu ka dhaliyay sideed gool oo uu ka dhaliyay horyaalka Bundesliga oo ku soo laabtay 2013 / 14. Wuxuu dhab ahaantii badbaadiyay afartan dhinac oo isku xigta. Wakhtiga qorista, ma ahan goolhaye nool (labadaba firfircoon iyo hawlgabba) ayaa ku garaacay rikoorkan aduunka.
dulqaadasho: Leno waxa uu leeyahay dulqaad badan oo ka duwan sida ugu fiican taariikhda casriga ah ee casriga ah. Wuxuu mar hore ku dhajiyay boostada oo sanka ka jabay, waligiisna kama baqayn inuu ka soo horjeesto ciyaartoydiisa ka soo horjeeda si ay kubada uga qaadaan.
Tani waxay ka dhacdey Champions League kulamadii ugu danbeeyay ee 16 Diego SimeoneAtletico Madrid.
Hantida FACT: Waad mahadsantihiin inaad akhrisid Dabeecadda Caruurnimadeeda Bernd Leno iyo Xaqiiqooyinka Aan Laheyn. At LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan sax ahayn, fadlan nala wadaag adigoo faallo ka bixinaya hoos. Had iyo jeer waanu qiimeynna oo ixtiraamnaa fikradahaaga.
Emmanuel Eboue Storyhood Plus Xogta Warka Xogta Leh
Arsene Wenger Caruurtiisa Sheeko Xogta Wanaagsan